06 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ62013
ဧရာမစက် (- ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံပြခန်း) အံ့အားသူရှည်လျားသောရထားလမ်းခရီးလျှော့ချထားသည်
ဧရာမမီးရထားစက်အံ့သြမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား (YHT) နေသောခရီးရှည်လျှော့ချခြင်းနှင့်တင်သောကိုခြေရာခံ, 49 ကီလိုမီတာကနေကြောင့်မီးရထားလမ်း Pamukova ခရိုင်၏တည်ဆောက်မှုသည်စိစစ်စက်များတွင်အရှည် 170 တန်ချိန်အတွက်စနစ် 100 မီတာအတွက်အသုံးပြုရန်ဂျာမနီနိုင်ငံမှဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ [ပို ... ]
မွေးကင်းစ Antalya ရထားစနစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်
အလွန်သေးငယ်သော Antalya ရထားစနစ်လည်ပတ်မှုများ: Döşemealtıအလင်းရထားစနစ် Center က Sinem ကောလိပ်ကျောင်းသားများအာဏာပိုင်များ 4-6 နှစ်အကြားအလွန်သေးငယ်သောသည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. ယူသွားရောက်လည်ပတ်သူကို Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အလင်းရထားစနစ် [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: Novosibirsk အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယား၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောပို့ဆောင်ရေး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောပို့ဆောင်ရေးဆိုက်ဘေးရီးယား 5-8 ၏ 2013 ဇွန်လအကြား Novosibirsk Novosibirsk, ရုရှားတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ Novosibirsk အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးနှင့် Novosibirsk အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော, ရုရှားလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်အတွက် 05-08 2013 ဇွန်လဆိုက်ဘေးရီးယား [ပို ... ]
ရထားလမ်း Ekinlik နေသောခေါင်းစဉ်: transitkazakhs ကနေကာဇက်စတန်အင်တာနေရှင်နယ်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော 2013
အဆိုပါ 2013 18-20 စက်တင်ဘာလအကြားကာဇက်စတန်အင်တာနေရှင်နယ်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော transitkazakhs ကာဇက်စတန်မှာရှိတဲ့အယ်လ်မတီ၏မြို့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ 18-20 စက်တင်ဘာလ 2013 11 transitkazakhs မှ။ ကာဇက်စတန်အင်တာနေရှင်နယ်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲအယ်လ်မတီ, ကာဇက်စတန်ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော transukra ယူကရိန်း
ယူကရိန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောအောက်တိုဘာလ911-2013 အကြားယူကရိန်း၏မြို့တော်ကိယက်ဗ်တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် transukra ။ ယူကရိန်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံတကာတရားမျှတသောဖြစ်ပါတယ်။ 09-11 2013 အောက်တိုဘာလ transukra ယူကရိန်းအင်တာနေရှင်နယ် [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: Warsaw ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော transpoland
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော Warsaw ကိုအတွက် transpoland 26-28 2013 နိုဝင်ဘာလဝါဆော, ပိုလန်တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးအခက်Taşımaclılık; လမ်း, ရထားလမ်း, လေနှင့်ပင်လယ်, ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် intermodal သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်မှုနှင့်ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ, [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဥဇဘက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - Trans ဥဇဘက်
ဖြတ်ကျော်ဥဇဘက်ဥဇဘက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲနိုဝင်ဘာလ 12-14 2013 နေ့စွဲအတွက် Tashkent တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ဥဇဘက်ပို့ဆောင်ရေး Fair ၏အကြီးမားဆုံးအပိုင်းစေ! 10 ။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဥဇဘက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲ - Trans ဥဇဘက် 2013 12 [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: 19 ။ မော်စကိုနိုင်ငံတကာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော Transrussia
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲဧပြီလ Transrussia အတွက်မော်စကိုတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်မော်စကို VVC ပြပွဲစင်တာတွင်ပြပွဲစင်တာ xnumx't ။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီနေရာကိုနှိပ်ပါပေးပါ: Raillynews အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerrayl စနစ်၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
RayHaber 06.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
B 70 Beton travers satın alınacaktır Rölöve ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması İşi (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Binasının) Şev Tahkimatı ve Aç-Kapa Tünel işi Yaptırılacaktır Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 02.01.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ [ပို ... ]
တူရကီက Metro, ပါတိတ် - Kizilay မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးစီးပွားရေးပိုင်ရှင်: ချဲ့ - COMSA မိတ်ဖက် Place: တူရကီတူရကီ Start ကိုနေ့စွဲ: မေလ 2012 ပြီးဆုံးရက်စွဲ: မေလ 2013 အလျား: 460,00 မီတာပုဒ်မ: 38 mxnumx စီမံကိန်း Features: [ပို ... ]
Sisli Metrobus ကောင် Metrobus လိုင်းမှာအမှုဆောင်တစ်ဦးဘတ်စ်ကားပေါ်မှာနံနက်ယံ၌တွေ့ရှိခဲ့သည်အလောင်းတွေပေါ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Sisli ကောင် Metrobus လိုင်းမှာအမှုဆောင်တစ်ဦးဘတ်စ်ကားပေါ်မှာနံနက်ယံ၌တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အထီးမှပိုင်ဆိုင် related အလောင်းများကို [ပို ... ]
ဘယ်လဂျီယံဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထားပေါက်ကွဲမှု 1 33 သေဆုံးသူနှင့်အခြားသူများဒဏ်ရာရရှိစဉ်အတွင်းဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ကုန်တင်ရထားလောင်ကျွမ်းဖို့ Wetteren ရလဒ်များကို၏ဘယ်လ်ဂျီယံမွို့၌ကိုမီးရှို့ကြ၏။ ဖြစ်ရပ်များသေးဖြစ်ပွားခဲ့သည်မည်သို့အရာရှိများကမတှေ့ [ပို ... ]
"ဒါကသာဖြစ်ပါသည်: တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအဘို့အဆင်သင့်မြောက်ပိုင်းအီရတ်ရထားလမ်းစီမံကိန်းအား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးSüleyman Karaman, လောကီသားကဆိုသည်သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ဦးဝေစုရရှိရန် xnumx'y 2020 ထရီလီယံဒေါ်လာသည်အထိကျင်းပလိမ့်မည် [ပို ... ]
အမြဲတမ်းစကားများ Sanliurfa ရထားလမ်းစနစ်ကျန်ရှိသည့်မီးမောင်းထိုးမှာထပ်ဖြစ်ပါတယ်
အမြဲတမ်းပြောပြီစကားလုံးများကို Sanliurfa ရထားလမ်းစနစ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်အစီအစဉ်များအပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အတွက်ကျန်ရှိနေသော, ထိုကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအလင်းရထားလမ်းစနစ်များအဖြစ်ထိပ်ဆုံးအေးဂျင့်များအကြားပြဿနာများနောက်ဆုံးမှာမှရပါလိမ့်မယ်, တိုင်းပလက်ဖောင်းကပြောပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး, ပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်တွေကခါရန်မြို့၌တက္ကသိုလ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဌာန [ပို ... ]
တူရကီ '' ရထားလမ်းအာဏာပိုင်များ '' ကဏ္ဍတွင်အားလုံးရထားလမ်းဖွင့်ပွဲနှင့်အတူကွန်ယက်အားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုအသုံးပြုရန်သံရထားလမ်းအာဏာပိုင်များထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman, "4-5 အာဏာပိုင်များမြန်ဆန်အဆင်ပြေလမ်းယူလူတွေကိုလေ့ကျင့်လိုလားသူဥပဒေသစ်မည်သူမဆို [ပို ... ]
အဆိုပါ Bursara Kestel ရေတွက်များအတွက်နေ့ဖွင့်လှစ်ဇာတ်စင်
Bursara Kestel အဆင့် Day ကိုထိုနေ့၏ Bursaray ကို C ဇာတ်စင် Kestel ရေတွက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ရေတွက်နေသည်ဖွင့်လှစ်ဘို့, စီမံကိန်းရဲ့ပြီးစီးမှုနှုန်း 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ တူရကီလမ်းမြို့လယ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးတည်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. တစ်လလျှင်ပြီးနောက်ဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
က Orient Express ကိုတော်မူမည်လော
က Orient Express ကိုတော်မူမည်လော ငါသည်ဘုရားသခင်၏လာမယ့်နှစ်တွေမှာကျန်းမာရေးပေးသည်ဆိုပါက .. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကတိပေးခဲ့ကြပြီ သင်အချိန်နှင့်ငွေကိုရှိပါကငါရှည်လျားသောမီးရထားခရီးကိုလုပ်ချင်ပါတယ်။ ရထားပို့ဆောင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ငါရထား၏တည်နေရာမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဘယ်သူမျှမကအခြားနည်းလမ်းများကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် [ပို ... ]
Metrobus တိုင်ကြားချက် box ကိုသက်တမ်းကုန်သွားပြီလွှမ်းမိုး
Metrobus တိုင်ကြားချက် box ကိုကျောက်ခဲနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ကြောင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်, အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အတွင်းမှပိတ်ဆို့မှုကို၏ညည်းညူသူအများအပြားခရီးသည်စီးတိုးဝှေ့ပွေး၏လူအစုအဝေး၌, [ပို ... ]
NEW xnumx.havalim ကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်
NEW xnumx.havalim တချို့ရဲ့ကန်ထရိုက်တာကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်, လေယာဉ်မှုး-uçakçမနေ့ကနှင့်ပြောဆိုသော ... ကျနော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကဲဖြတ်ရကွပွီ။ ငါတို့သည်ဤလုပ်ငန်းကိုသိကျွမ်းတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ လူတိုင်းသဘောတူနှင့်အညီ "ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ " ပိုပြီးဒီလေဆိပ်တည်ဆောက်ရေး [ပို ... ]
35, 43H, D5 နှင့်4/ IR လိုင်းများအားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို run နိုင်ရန်အတွက် Bursa လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှု Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်အပြောင်းအလဲစေခဲ့သည်။ အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်, အသစ်သောလမ်းများ, ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]